Global Voices teny Malagasy » ‘El Hombrecito’ Miaina Fiainana Ara-mozika Amin’ny Literatiora Ao Amin’ny Repoblika Dominikana · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 17 Septambra 2016 7:03 GMT 1	 · Mpanoratra Natali Herrera Pacheco Nandika (en) i Eleanor Weekes, Raveloaritiana Mamisoa
Sokajy: Amerika Latina, Karaiba, Repoblika Dominikana, Haisoratra, Mediam-bahoaka, Mozika, Zavakanto & Kolontsaina
Ny vondrona El Hombrecito dia ahitana an'i Frank Báez, Homero Pumarol, Ángel Rosario, Fernando J. Soriano, Wilson López, Vadir González sy Jaime Guerra, ary mampiray ny mozika, tononkalo sy ny zavakanto ara-maso amin'ny fampisehoan'izy ireo.
Dika nasiam-panovana tamin'ny tantara navoaka voalohany tamin'ny teny Espanioka ity lahatsoratra ity.
Tamin'ny 1979, nampiasa ny fomba fitenin'ilay lehilahy Frantsay François Rabelais “nosy feno feo” ilay mpanoratra Kiobàna Alejo Carpentier, raha niresaka momba ny nosy Karaiba. Hoy i Carpentier:
Misy feo daholo ny zava-drehetra ao amin'ny amin'ny vondro-nosy Antilles, misy feo na aiza na aiza
Raha misy feo daholo avokoa ny zava-drehetra ao Antilles, ahoana izany ny momba ireo zavatra mangina antsointsika hoe boky? Mety tsy hampiseho ny azy manokana ny literatiora Karaibeana, saingy nanome feo ho amin'izany (literatiora) ny vondrona iray ao amin'ny Repoblika Dominikana.
El Hombrecito  (Lehilahy Kely) dia ahitana an'i Frank Báez, Homero Pumarol, Ángel Rosario, Fernando J. Soriano, Wilson López, Vadir González sy Jaime Guerra, ary manambatra ny mozika, ny tononkalo sy ny zavakanto ara-maso amin'ny fampisehoan'izy ireo.
Tamin'ny antsafa, hoy i Frank Báez, mpikambana ao amin'ny El Hombrecito hoe:
Eo amin'ny fihaonan'ny samy poeta, matetika dia mifanena amin'ny poeta mitovy ianao. Tsy misy olona maty manatrika fitanisana tononkalo amin'ny fomba fanatrehan'izy ireo rindrankira. Izany no atolotry ny El Hombrecito: rindrankiran-tononkalo, traikefa hafakely.
Mametraka ny tononkalo amin'ny mozika toy ny bachata, rock, na mozika andrana ny El Hombrecito ary amin'ny fanaovana izany, mikendry ny hitondra ny asa haisoratry ny mpikambana ao aminy any amin'ny mpihaino maro kokoa.
Ohatra, nanao fampisehoana marobe tamin'ireo tononkalo nivoaka tamin'ny angona 2014 an'i Báez ny vondrona, Tamin'ny alina, nanonofy aho hoe DJ / Anoche soñé que era un DJ (Miami, Etazonia: Libros Jai-Alai. Fanontana amin'ny teny roa). Tamin'ireo andiana tononkalony, hitanay fa ny mpanoratra ihany no mpilalao, poeta, izay mitady ny tenany eny rehetra eny. Tamin'ny tononkalo iray, nifanena tamin'ny “Marilyn Monroe avy any Santo Domingo,” izahay, notontosaina tao Quisqueya (anarana hafa nomena ny Repoblika Dominikanina) sy New York ny tantara.
Ny andrin'ireo tononkalony dia mitoetra ao amin'ny fihenjanana ankolaka izay sady mampiray no mampisaraka ny kolontsaina Dominikàna amin'ny kolontsaina pop manerantany, ny mety ho lasa na tsy ho lasa mpanoratra, sy ny olana tsy tapaka eo amin'i Karaiba sy i Etazonia:
Niantso an'i Miguel an-telefaonina aho ary nanontany azy
inona no mety tsara tsara kokoa ho ahy DJ sa poeta
Ary nilaza i Miguel fa tokony hanohy ny maha-poeta aho.
Nilaza koa ny sipako hoe poeta.
Nilaza ny anadahin'ny sipako hoe poeta
Ary ilay tovovavy nilahatra tao amin'ny sarimihetsika
Izay vao avy nihaona tamiko, nilaza hoe DJ.
(Halina aho nanonofy hoe DJ)
Tamin'izaho valo ambin'ny folo taona no namoaka sangan'asa voalohany
Tamin'ny gazetiboky ara-kolontsaina.
Tsy tadidiko ny momba ilay tononkalo.
Ny tsaroako dia nandamoka ilay famoahana.
Tsy namaky ny tononkalo akory, dia niampanga ahy ho mpaka tahaka ny vondrona poeta..
Naneho hevitra i Manuel Rueda fa tokony hamaky ireo klasika aho.
Nanoro hevitra ahy ny tranomboky fa tokony hamaky ireo poetan'ny post-maoderina aho.
Ilay tovovavy nanao nanao dikasary tao amin'ny sampan-draharaha
nilaza fa tsy ampy fihetseham-po aho
Voaràra tsy hahazo hanatrika ireo atrikasa rehetra momba ny haisoratra aho
Nilaza ireo tompon'ny fanampin'ny gazetiboky fa nihena ny gazety lafo hatramin'ny namoahan'izy ireo ny tononkaloko.
Fampanjakam-bahoaka ny literatiora
Tamin'ny fanasongadinana ny sasany amin'ireo toetra mampiavaka ny literatiora Amerikana Latina sy Karaibeana nandritra ny taona maro mikasika ny fampiasana azy amin'ny mozika, hitantsika ireo mpanoratra etsy andaniny fa nirona tany amin'ny endrika sy karazana mozika nentim-paharazana Eoropeana – ilay antsoina hoe kolontsaina ambony na zavakanto ambony, toy ny amboaram-peonkira (symphonies) – ary etsy ankilany, nirona tany amin'ny fomba hafa sy tiam-bahoaka ny hafa.
Ny andinin-tsoratra mozika ampiasain'ny mpanoratra amin'ny lahatsoratr'izy ireo dia milaza betsaka momba ny mpamaky kendren'izy ireo. Nilaza ilay Pôrtô Rikana mpanoratra, Frances Aparicio, fa ny literatiora nandritra ny vanim-potoana “Boom (Firoboroboana)” (hetsika literatiora Amerikana Latina nahazo vahana tamin'ny taompolo 1960 sy 1970) dia nosoratana ho an'ireo “mpamaky borizano idealy sy ny manam-pahaizana, izay efa zatra ny literatiora Eoropeana, Amerikana Avaratra ary Amerikana Latina, raha milaza ny mifanohitra amin'izany kosa ny “fantina amin'ireo lahatsoratra mozika” amin'ny literatiora Karaibeana taorian'ny firoboroboana:
Mifanohitra amin'izany, maneho ny fisokafana na ny fampanjakam-bahoaka ny mpamaky Pôrtô Rikana na Karaibeana izany, izay mahafantatra ny lahatsoratra amin'ny fampiasana mozika malaza, ary tsy mila hoe manam-pahaizan'ny oniversite na kolontsaina tandrefana vao mahafantatra azy.
Mampiseho ny fitomboan'ny faniriana hifandray amin'ny mozika malaza sy miaraka amin'ireo karazana mpamaky marobe izany fiovana izany.
Ny mozika dia hita amin'ny asa noforonin'ny mpanoratra tahaka ilay Pôrtô Rikana Luis Rafael Sánchez , Kiobàna Guillermo Cabrera Infante  sy Alejo Carpentier , sy ilay Dominikàna Marcio Veloz Maggiolo , Pedro Antonio Valdéz  na Pedro Vergés , ary koa ny karazan-dahatsoratra toy ny tononkalo dub ao Jamaika sy ny novela -bolero ao Amerika Latina sy Espaina.
Saingy ohatra iray amin'ny vondrona mampivoatra azy ny El Hombrecito, manakambana ny endrika zavakanto isan-karazany mba hahazoana mpihaino bebe kokoa.
Amin'izany fomba izany, lasa mpanao fampisehoana ny mpanoratra, ary afaka miaina tsy misy fanohanana ara-pitaovan'ny boky ny tononkalon'izy ireo: afaka miaina ao anatin'ny fiarahamonina sy ny fampisehoana ny tononkalo, izay lasa traikefa fampiratiana ny literatiora, araka ny nolazain'ilay mpanoratra Kiobàna Antonio Benítez Rojo.
Izany ezaka hampanjakam-bahoaka ny literatiora amin'ny alalan'ny fironana amin'ny karazana mozika tahaka ny bolero, bachata na guaracha izany dia nahazo mpankafy eo amin'ny sehatra ara-batana sy antserasera ao amin'ny YouTube. Ary ny asa ara-javakanto El Hombrecito dia nanome sehatra hafa ho an'ny fehezan-teny hoe: ‘Misy feony daholo ny zava-drehetra ao amin'ny Antilles; misy feo na aiza na aiza, ‘mampiseho antsika fa ao Karaiba, mety ho mozika ihany koa ny boky.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2016/09/17/88499/
 tononkalo dub : https://en.wikipedia.org/wiki/Dub_poetry